Kuqini Ezokuphepha Kuvele Iphoyisa – eHowzit
Kuqini Ezokuphepha Kuvele Iphoyisa
Thami Nkosi no Malusi Mhlongo
BEKUQINISWE ezokuphepha ngesikhathi kuvele iphoyisa lesifazane uConstable Balungile Prettygirl Madlala, 35, enkantolo yesifunda yase Port Shepstone, ngecala lokudubula abulale umkhwenyana wakhe uMnu Thulani Madlala Umamezala kanye nokulimaza umakhelwane ngesonto ekuseni mhla ziyi-7, eBhobhoyi endaweni yase Mbontsha.
UMphathi wamaPhoyisa u Agnes Nxamangele nethimba lakhe kanye nabakwa TRT bebephansi phezulu bevimba izintatheli ukuba zithathe izithombe ngesikhathi kuqhubeka ukulalelwa kwecala lakhe, okuze kwaholela ekutheni imantshi yenkantolo inqabele ukuba kuthathwe izithombe kulelicala ebelidonse amehlo abaningi, njengalokhu inkantolo ibigcwele iphuphuma.
Ngokuthola kwabezindaba ze eHowzit kuthiwa uMnu Thulani obesebenza ngaphansi kwamasipala wase Hibiscus Coast Municipality wayephuma emsebenzini ebusuku ngesikhathi efika ekhaya ekuseni ngezinhloso zokulungisela ukuya emshadweni nomsolwa nalapho kuthiwa unkosikazi wakhe waye phansi phezulu evutha umlilo ngolaka, nokusolwa ukuthi ilo olwaholela ekutheni agcine ngokusoconga lomndeni.
Lelicala neligcine ngokuhoxela mhla zingama-18 kuyo lenyanga kuthiw ingoba ummeli kammangalelwa uMnu Sibusiso Dlamini esuke wavezela inkantolo ukuba usafuna ukuba alungiselele ukulalelwa kwesicelo se bheyili njengalokhu kuthiwa lomsolwa unengane encane kanti kunezinsolo zokuthi washawa ngaphambi kwesigameko.
Umnu Bonga Madlala oyilunga lomndeni uthe yena wathola ucingo ekuseni watshelwa ukuba aphuthume emzini kamfowabo emuva kokuba kuthiwa kukhona okwakungahambi kahle, nathi wathi uma efika wazithela kuwona lomhlola.
Abomkhandlu wase HCM ngomlomo ka Simon Soboyisa uthe badlulisa amazwi enduduzo ngokudlula komsebenzi abathi ubewenza ngokukhulu ukuzimisela umsebenzi futhi ehlonipha